Soomaaliya oo heshiis taageero farsamo la saxiixatay UPU | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya oo heshiis taageero farsamo la saxiixatay UPU
Muqdisho (SNTV):– Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada ayaa heshiis kaalmo farsamo la saxiixatay Ururka Boostada Adduunka (UPU), kaas oo dalkeena looga caawin doono qaabka ugu habboon ee dib loogu soo nooleyn karo adeegga boostada.
Wasiir Cabdi Cashuur ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay Danjire Bishaar iyo madaxda waaxyaha kala duwan ee UPU sida degdegta leh ee ay uga jawaabeen baaqii Soomaaliya.
“Mashruucan waa tallaabo wanaagsan, laakiin anaga waxaa wax kasta nooga qiimo badan soo-dhoweyntii diirraneyd ee aan la kulannay UPU,” ayuu yiri wasiir Cashuur oo intaasi ku daray. “Taageerada farsamo ee nala siiyay waxay naga caawineysaa sidii aan ku dhisi lahayn aasaaska boosto la jaan-qaadi karta meesha ay boostadu maanta mareyso,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiirku.
Previous articleRa’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo Maamulaha USAID oo ku kulmay Washington
Next articleAfricom”Waxaan Howlgal ku dilnay xubno ka tirsan Alshabaab”